Ukuze kokuqeda Uphahla lwangaphakathi usebenzisa obukhulu, embossed lodonga ukuthi ukwazi ukufihla ukukhubazeka encane ebusweni. Lezi kungaba lodonga okungezona nokwelukiweyo noma vinyl for ophahleni futhi uketshezi, ukhuni, i-3D-odonga. Modern ikhava nonwoven wenza kusukela onomfutho cellulose Imicu yotshani afuthwe ngesibulali laqanjwa ekhethekile. Bavumela izindonga nophahla ukuphefumula, ngoba banayo emoyeni omuhle futhi umswakama permeability.
Non-ephothwe ulwelwesi iphepha-based evimbela kumiswa Bubbles futhi ifihle amaphutha. By the way, laba wallpapers kungenziwa zaveza ngamanzi-ukuhlakazwa upende, uma ufuna ukushintsha umbala ophahleni.
Vinylic futhi aqukethe iphepha kanye Indwangu nonwoven, kodwa ungqimba phezulu yakhiwa polyvinyl chloride. Lezi ezinengilazi ngokuvamile ukuhlobisa umfanekiso noma embossing. Vinyl lodonga for ophahleni kuvimbela sande namagciwane ayingozi.
Ukukhetha flooring okungezona nokwelukiweyo noma vinyl, ukubheka roll lokubeka uphawu, lapho wathi ukwakheka kanye izakhiwo eziyisisekelo. Thatha isithombe sangemuva for ophahleni ngemajini encane, futhi kusukela batch esifanayo, njengoba kungase kwenzeke imibala ukuhluka.
Manje-ke yimfashini kakhulu ukusebenzisa 3D-iphepha lokunamathisela odongeni, ikakhulukazi uma ikamelo elincane. Bona zibukeke bandise isikhala, afihle semfene, ahlanzekile ngokuphelele futhi ube okusezingeni eliphezulu umlilo ukumelana.
Uma fan of izinkuni phambi ukuhlobisa ophahleni, ukuhlangana lodonga lokhuni. Sinenkosi izici ezilandelayo ezinhle:
nobungane kwemvelo ngenxa isicelo ka zezihlahla;
Easy obandayo ophahleni usebenzisa metal Ukugunda;
Igumbi ukuguqulwa ngenxa ezahlukene ukustaka panel (nendawo noma thwi).
impahla okusha kule sekugcineni - udonga uketshezi kule ingaphakathi.
Sinenkosi izinzuzo eziningi futhi ngokushesha kuyanda.
Zenziwa zikakotini kanye cellulose zesivikelo sesifuba. Usilika izindikimba ungakwazi ukwengeza kanye izithasiselo ukudala ebusweni yasekuqaleni.
lodonga Liquid ku nomswakama esabekayo. Ngakho-ke, uma ungazi ukuthi yini ukuhlobisa ophahleni egumbini lokugezela, ukubeka ketshezi iphepha lokunamathisela odongeni, bayigubungele ungqimba phezulu lacquer.
ezinengilazi Liquid ngenxa isakhiwo zabo izimfanelo eziningana ezinhle:
isakhiwo microporous azigcina ukushisa kakhulu futhi yisivikelo umsindo;
ngezinto zemvelo eluhlaza kuvimbela uthuli ekuqongeleleni;
ebusweni ephakanyiswe efihla konke ukushiyeka ophahleni, ezilimele enamathela ingxube sisetshenziswa endaweni ethile;
Ukwakheka ekhethekile kuvimbela wokudamba futhi kukhulisa izakhiwo refractory.
lodonga Liquid elingaphakathi babe ethile eyodwa kuphela - kuba nezindleko ephakeme okufukuzwa kulo yokuqedela.
Oku-isidingo ukuhlanza ebusweni kusuka ukungcola nangesikhunta futhi yomile. Okulandelayo, kufanele primed. Khona-ke ingxube ukuthi buhlanjululwe ngamanzi iziyalezo ngqo. isicelo Ngokusobala noma spatula senziwe dispenser ekhethekile. Inqubo ungathi superimposition ka ngomala usimende. lodonga Liquid ukuze ophahleni ukuze zome izinsuku ezintathu.
Ngokuphathelene yesondlo, ebusweni okuholela akusho buthelela uthuli, ngakho kwesinye isikhathi kungasebenza ngokwanele bahlanza by cleaner enamathela.
Ezahlukene imikhiqizo ikuvumela ukuthi ukhethe lodonga for ophahleni yonke ukunambitheka kanye egumbini ngalinye. Inani ezinengilazi incike umakhi, kanye iphethini noma ezinye izithasiselo zokuhlobisa. Kuze kube manje, wonke lodonga angathengwa at ezitolo inthanethi, okuyinto iyehlisa kuba umzukuzuku ukuthola inketho eyamukelekayo.
Gidroparoizolyatsionnaya ifilimu: Izimpendulo isici, ukusetshenziswa
I engela ukuthambekela uphahla ungagcina isakhiwo kusukela sezulu noma kubangele incithakalo yayo
Imicabango ngalokho igama elithi "umusa"
Ukuze iziyalezo zendlela ukwenza isignisha yezinombolo
Oslo - inhloko-dolobha yaseNorway